Fiteny · Oktobra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Fiteny · Oktobra, 2007
Tantara mikasika ny Fiteny tamin'ny Oktobra, 2007
Japàna : Fiteny sy vakoka
Japana 19 Oktobra 2007
Mety tena afaka mianatra tenim-bahiny sady mijanona tsy mahalala n'inoninona akory momba ny vakoka manodidina izany fiteny izany ve ? Mahaliana ny adihevitra nateraky ny lohahevitry ny mpiblaogy Ampontan [Anglisy]. Oiwan Lam
Lahatsoratra Malaza 06 Oktobra 2007
Isika zanak'olombelona dia miaina anivon'ny firenena miisa 194 fotsiny, aleo angaha atao hoe na mihoatra kely na latsaka kely, anefa dia ny fitenintsika dia anelanelan'ny 7'000 sy 8'000 isa. Mihena an-toerana anefa ireny fiteny maro samihafa ireny. Tombatombanana ho fiteny iray no manjavona isan-tapa-bolana. Zato taona lasa izay, firenena Erôpeana...